भ्वाइस अफ नेपालको सेटमा किन रोए राजु लामा ? (भिडियोसहित) - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका २० चैत्र २०७७, 9:45 pm
यतिबेला धुमधामसाथ ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को माहौल तातिएको छ । देशको कुना-कन्दरा मात्र होइन, सीमापारमा समेत रहेका नेपाली गायन प्रतिभा खोज्ने लोकप्रिय रियलिटी शो हो यो । भ्वाइस अफ नेपालको सिजन ३ सुरु भइसकेको छ ।
राजु लामाले आफुलाई सम्हाल्न सकेका छैनन् । उनी स्वभाविक बन्ने प्रयास गर्छन्, तर गहभरी छचल्किएको आँशु लुकाउन सकेका छैनन् । उनी रोएको देखेर बाँकी कोचहरु पनि भावुक बन्छन् ।
खासमा राजुले नै अर्का कोच बरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठलाई गीत सुनाउन अनुरोध गर्छन् । दीपले आफ्ना पुराना गीतमा भाका हाल्छन्,-
‘झिरमा उनीनु त्यो एउटा कुरा
पिरमा उनीनु त्यो एउटा कुरा
नभिज्ने आँखा कसको छ र ?
तर, झर्नु नझर्नु त्यो अर्को कुरा ।’
गीत सुन्दा सुन्दै राजु लामाले आफुलाई थाम्न सक्दैनन् । दीप श्रेष्ठतर्फ फर्किएर भन्छन्, ‘दाई, मलाई रुवाउनुभयो ।’
भ्वाइस अफ नेपालको यस सिजनमा तीन जना पुरानै कोच छन्, राजु लामा, दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल । यसपाली तिर्सना गुरुङ पनि कोचको कुर्सीमा छिन् । यसका निर्देशक तथा प्राजेक्ट हेड लक्ष्मण पौडेल हुन् भने कार्यकारी निर्माता र होस्ट, सुशिल नेपाल ।